The "Buuhoodle" - A Self-Dheelitirka mooto aad qaadato in ay - Jomo Technology Co., Ltd
Tani Koowheel Electric isku dheelli mooto E1 iftiin laakiin firfircoon yahay, patent Cusub oo design qabow moodada, LED screen bandhigay gebi tuso batari iyo xawaaraha, nuugista lama filaan ah super la caag 8inch taayirrada pneumatic. Ka sokow, duubnaadaan oo si fudud u qaado. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku siin karaan tamar isku mid ah iyo xasilooni sida loo heli karo la faashiyoonadi sare-dhameystaan. Stem kordhiin, wanaagsan ee carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Waxaa intaa dheer, mid kale oo lagu skeidgareeyo fiican korontada waxaa dhab shiday lacagaha loo baahan yahay si ay u ordo buste si dhakhso ah kala dheer iyo waa in ay ahaadaan taam u fuushan dhaadhacyadii aad. Xawaaraha ay u safraan ee soo baxa Hargeysa, si kastaba ha ahaatee waxay noqon kartaa gaari max xawaaraha 42 km saacadiiba ku.
Haddii aad u baahan tahay si ay u iibsadaan ah mooto korontada aad isticmaalka shakhsi, taas E1 waxaa laga yaabaa in aad u dhaqaale iyo waayo-aragnimo waxtar adiga iyo qof kasta oo aad jeceshahay. Macna ma laha inta badan aad bixiso, waa ku dhawaad malaysan karin in ay la kulmaan nooca halista dabka hadheeyay (ama ma gaadno) gudaha mooto kasta. Sidaa darteed, hoos roob culus, waa miyir oo kaliya in ay marayso, iyo ka puddles sii iska. Si kastaba ha ahaatee marka loo eego guddiga la xoojiyey, E1 uu leeyahay tag a runtii wacan oo qiimihiisu waayo, taasu ee xubno ka - wax dheeraad ah, waxba ka yar. Baaskiilada waxaa loo isticmaalaa ma ahan oo keliya ujeedooyin madadaalo si kastaba ha ahaatee, waayo, jeebkayga - in ay ka shaqeeyaan, si ay dukaan raashinka, waxa weligiisba aad leedahay. I jiid badan iyo leedahay qalfoof dhow-qorrax dhaca laga cabsado. Midkii kowaad wuxuu u egyahay la orod ah oo inta badan 16mph, halka dambe kor u tegi kartaa 22kmh. Waxaa laga yaabaa in fikradda ah oo xadka xawaaraha ee Harley yar ah.
waqti Post: Apr-20-2018